पाथीभारा माताको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस । – Namaste Dainik
पाथीभारा माताको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस ।
July 22, 2020 NamastedainikLeaveaComment on पाथीभारा माताको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस ।
कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णको चर्को बिरोध हुनसक्छ अलि बढि ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिय पनि सोचेजस्तो नतिजा नआउँने हुँनाले मन खिन्न हुनेछ । परिवार तथा आफन्तजन लाई समय दिन नसक्दा मनमुटाबको अवस्था सिर्जना हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । कृषि क्षेत्रको लगानीबाट भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ।
आमाबुबाका हत्यारासँग एक्लै लडिन् अफगानी किशोरी ।
सुनले आज पनि बनायो रेकर्ड, ताेलाकै यति धेरै ?
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल भाद्र १० गते – बुधबार! पाथिभरा माताले सबैको रक्ष्या गरुन।